Progressive Voice Myanmar » Animation: From Refugees to IDPs: Untold Story of Displacement Cycle in Burma
June 20th, 2016 • Author: Burma Link and Burma partnership •2minute read
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ အတင်းအဓမ္မ ပြန်ပို့ခံရသော မွန်ဒုက္ခသည်များ၏ ဒုက္ခခံစားရပုံကို ဘားမားလင့် နှင့် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့တို့မှ “ဒုက္ခသည်မှသည် ပြည်တွင်းတိမ်းရှောင် ဘ၀သို့ – မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥပေက္ခာပြုခံ နေရပ်မှဖယ်ရှားခံရမှု သံသရာ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကာတွန်းသရုပ်ပြ တင်ဆက်ထားပါသည်။ ထိုမွန်ဒုက္ခသည်များသည် နေရပ်သို့ပြန်ပို့ခံခဲ့ရသည်မှာ နှစ်၂၀ ကျော်ပြီဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုံခြုံမှုအတွက် တည်တံ့ခိုင်မာသည့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ မရှိသေးသဖြင့် ပြည်တွင်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူများအဖြစ် ၎င်းတို့၏ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များအတွက် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့မှုအပေါ်တွင် ယခုချိန်ထိ မှီခိုနေရပါသည်။
ယခုလက်ရှိတွင်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေသော ဒုက္ခသည် ၁၀၀၀၀၀ ကျော်အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ပို့ရန် ဆွေးနွေးနေကြပါသည်။ အကြီးစား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအားသာ အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် အိုးအိမ်စွန့် စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ ရုန်းကန်ရမှုများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည် အသေးအဖွဲအဖြစ်သာ သဘောထားခံရသည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပြီး ၎င်းတို့အား လက်ရှိကာလ ဒီမိုကရေစီနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်သလောက် ထည့်သွင်းဖော်ပြ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း မရှိသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ဒုက္ခသည်များအားပြန်ပို့ရေး ဆွေးနွေးမှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေသည့် ယခုလိုအခြေအနေမျိုးတွင် အတိတ်က သင်ခန်းစာများအား မမေ့ရန်လိုပါလိမ့်မည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းချက်၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားတန်းတူအခွင့်အရေး ကင်းမဲ့နေရုံသာမက မြေသိမ်းယူမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတို့သည် ၎င်းတို့၏မူလနေရာသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပြန်လာနိုင်ရေးတွင် အတားအဆီးများ ဖြစ်နေသေးသည့်အတွက် မွန်ဒုက္ခသည်များ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသကဲ့သို့ ဒုက္ခသည်များအဖြစ်မှ ပြည်တွင်းအိုးအိမ်စွန့် တိမ်းရှောင်သူများအဖြစ် တစ်ပြန် တစ်လဲ ဖြစ်လာမည့်အရေးကို မွန်ဒုက္ခသည်များသာမက အခြားတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များပါ ရင်ဆိုင်ရမည့်အရေး စိုးရိမ်မှုများတိုးပွားလာနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များအား ပြည်တွင်းအိုးအိမ်စွန့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများဖြစ်အောင် ထပ်မလုပ်ပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ဌာနေပြန်လာနိုင်ပြီး တည်တံ့သော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းသည့် ဘ၀များ ထူထောင်နိုင်စေရန် အာမခံလုပ်ဆောင်ပေးကြပါ။
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ဒုက္ခများနေ့တွင် ဤကာတွန်းသရုပ်ပြ “ဒုက္ခသည်မှသည် ပြည်တွင်းတိမ်းရှောင်ဘ၀သို့ – မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥပေက္ခာပြုခံ နေရပ်မှဖယ်ရှားခံရမှု သံသရာ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ကာတွန်းသရုပ်ပြပုံကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မြန်မာဘာသာဖြင့် ကာတွန်းသရုပ်ပြပုံကို ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Today, on World Refugee Day, an animation created by Burma Link and Burma Partnership reminds the world of the plight of Mon refugees from Burma who were pushed back to their home country in 1994. Over 20 years has passed since the refugees were sent back and those who have now become IDPs in sites situated along the border have yet to have foundaproper solution in securing their livelihoods and still depend on international assistance for their daily needs.
Currently, plans to repatriate over 100,000 refugees along the Thailand-Burma border back to Burma are being discussed. The recent story of democracy and transition has insufficiently addressed the ongoing struggles and concerns of the IDPs and refugees, as they become an inconvenient truth rendered invisible by the larger reform narrative. As ongoing discussions regarding refugee repatriation continue, there is an increasing concern that the Mon refugees’ experience of becoming IDPs could be repeated in the absence ofanationwide ceasefire and political solution as land grabbing and foreign investment threaten their safe and durable return.
Don’t let more of Burma’s refugees become IDPs and ensure that they return home in dignity to live in peace with durable livelihood solutions.
Watch the animation in English here.
Watch the animation in Burmese here.